You bụ ụdị onye nwere mmasị ịga ije na njegharị ụgbọ ala? Mgbe ahụ a na post abụghị n'ihi na ị na! Anyị na-eche ụzọ kasị mma ịhụ ụfọdụ nke Europe na iconic saịtị bụ site sipping champeenu na a n'elu ụlọ Ofel ma ọ bụ Cafe. Ebe a bụ ụfọdụ Best n'elu ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na cafes na Europe otú i nwere ike n'anya-ahụ na style.
Best n'elu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na cafes na Europe: Atlante Star Hotel - Rome, Italy
Fast ụgbọ oloko si London ka Rome were gburugburu 14 awa, ekpuchi a anya nke odika 1,434 kilomita. E nwere Ugboro ọrụ na okporo ígwè na-aga n'etiti London na Rome. Insgbọ oloko maka njem a na-emeghekarị maka ịgba akwụkwọ na gburugburu 12 ọnwa n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ntinye akwụkwọ erubeghị maka ụbọchị gị, ị nwere ike ịtọ akwụkwọ ntinye akwụkwọ iji nweta ozi ị ga-enweta n'ụbọchị tiketi dị ọnụ ala dị ala maka njem gị site na London ruo Rome n'ụgbọ okporo ígwè. Iji Save A Train ịtụ ngwa ngwa na mfe!
N'ihi na otu onye nke kasị mma echiche na Paris, isi n'elu ụlọ nke Galeries Lafayette ngalaba ụlọ ahịa. Seven ala elu, a 1500m Ofel awade a-akpali mmasị n'ezie 360 ​​Celsius echiche n'elu Paris. The Opera House bụ na nso nso na eiffel tower bụ ya backdrop. Ma, ọ bụghị naanị banyere echiche, ma teres nwekwara a n'oge a na sleek n'elu ụlọ mmanya na-akpọ The Cube Bar.
Best n'elu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na cafes na Europe: Aria Hotel High Note Sky Bar - Budapest, Hungary
Aria Hotel High Note Sky mmanya na Budapest enye oké 360 ogo echiche nke Buda na Pest. Ọ na-emi odude na obi Pest, dị nnọọ a nkume si na otutu n'ebe St. Stephen nnukwu ụlọ ụka Senti. Nke a-adọrọ adọrọ nkecha mmanya nwere nnọọ izuike vibe, na ọ bụ a n'ụzọ zuru okè na-enwe Budapest na gị ezinụlọ na enyi.
The ụgbọ okporo njem si London na Budapest dị nchebe, mfe na oké ọnụ na-ewe nanị 24 awa, site Eurostar na Paris na elu-ọsọ TGV si Paris na Munich, mgbe ahụ n'abalị ụra ka Budapest. Ma ọ bụ na e nwere njikọ via Paris na Munich, ma ọ bụ site na Brussels, Cologne & Vienna.
1881 per SAGARDI bụ ụlọ oriri na ọ ofụ ofụ nke History Museum of Catalonia, a pụrụ iche ohere na obodo na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Barcelona na raara kpamkpam Mediterranean nri, site n'oké osimiri ala. Nke a ahụmahụ na dechara na Terrace nke Indianes, a dịkọrọ ndụ Ofel mmanya mmanya na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Barcelona.
Ọ dị mfe na-eme njem site na UK ka Spain ụgbọ okporo ígwè. Otu ụtụtụ Eurostar gaa Paris na 2h20 site na £ 44 n'otu ụzọ ma ọ bụ £ 58 laghachi, nri ehihie na ụlọ oriri na ọ Trainụ Trainụ Train Bleu dị ịrịba ama na Gare de Lyon, mgbe ahụ n'ehihie okpukpu abụọ TGV Duplex ka Figueres (maka Salvador Dali ngosi nka), Girona & Barcelona si € 39 onye ọ bụla ụzọ. *Ahịa isiokwu ịgbanwe.
#Kachasị #BestEuropeRestaurant #Restaurantslọ oriri na ọụ Bestụ kacha mma #cafeview #ụlọ oriri na ọviewụ restaurantụ #n'elu ụlọ europetravel longtrainjourneys Tranride Train Travel